Gịnị mere? | Martech Zone
Kedu ka ụlọ ọrụ gị si enweta uru?
Ihe mgbaru ọsọ nke ụlọ ọrụ gị ọ dabara na iwulite uru ahụ?
Ihe mgbaru ọsọ ndị otu njikwa gị ọ bụla dabara iji kwado ihe mgbaru ọsọ nke ụlọ ọrụ gị?
Ihe mgbaru ọsọ ndị ọrụ gị ọ bụla dabara na ebumnuche njikwa gị?
A na-atụle arụmọrụ ndị ọrụ gị megide ebumnuche ha?
Ekpebiri ụgwọ ọrụ onye ọ bụla site n'otú ha si emezu ebumnuche ndị ahụ?
Nkwụghachi ụgwọ nke onye ọrụ ọ dabara na mmetụta nzute ebumnuche ndị ahụ nwere na njedebe nke uru ụlọ ọrụ ahụ?
Rewardedgwọ onye ọrụ gị ọ bụla akwụgoro maka ịgbabiga ihe mgbaru ọsọ ndị ahụ n'ụzọ dabara adaba na mmetụta ha na-enwe na ala?
Oge awa ọ bụla nke ndị ọrụ gị ọ bụla na-emetụta ikike ha nwere iru ihe mgbaru ọsọ ha?
Tags: njikọ akaarụmọrụuruSocial Media Marketing